I-Royal Revenue Assent ijika iiBhili kwiCanada
Indlela iNod evela kuMmeli kaKumkanikazi yenza umthetho
KwiCanada, "inkululeko yokumkani" iyona nqanaba lokugqibela lomgaqo-mthetho apho ibhilikhi iba ngumthetho.
Imbali yoMthetho weRoyal Assent
UMthetho-siseko we-1867 usungulwe ukuba ukuvunyelwa kweNkundla , ebonakaliswe yigunya lokumkani, kufuneka ukuba kukho nawuphi na umrhumo wokuba ngumthetho emva kokugqithiswa yi- Senate kunye neNdlu yeeNgingqi , ezo zimbini zePalamente. Isiqinisekiso sokubuyiselwa kwiRoyal isigaba sokugqibela senkqubo yomthetho, kwaye yile mvume evakalayo yokuguqula ibhilikhi epapashwa yiNdlu yePalamente ibe ngumthetho.
Xa ukunikezelwa kwebukhosi kuhanjiswe kwi-bill, kuba ngumThetho wePalamente kunye nxalenye yomthetho waseKhanada.
Ukongezelela ekubeni yinxalenye efunekayo yenkqubo yezomthetho, imvume yokubukwa kombuso inokubaluleka okuphawulekayo eCanada. Oku kungenxa yokuba igunya lokumkani libonakalisa ukuza kunye kwezinto ezintathu zomgaqo-siseko wePalamente: iNdlu yeeNgqungquthela, i-Senate kunye neNkundla.
Inkqubo yoLuntu lweNkundla
Isiqinisekiso sobukhosi singanikezwa ngenkqubo ebhaliweyo okanye ngomcimbi wendabuko, apho amalungu eNdlu yeeNdlu eziManyeneyo ajoyina abo basebenzisana nabo kwigumbi leSeneti.
Ngomkhosi wamasiko obukumkani, ummeli weNqununu, okanye igosa eliqhelekileyo laseKhanada okanye iNkundla ePhakamileyo, ifika kwiCandelo leSenate, apho abaphathi bee-senate bahlala khona. Umsebenzisi we-Rod Rod ubiza amalungu eNdlu yeeNdlu kwiKomiti yeSenate, kunye namalungu eendlu zombini zePalamente ayifumana ukuba amaKhana anqwenela ukuba ibhilikhwe ibe ngumthetho.
Umcimbi wendabuko kufuneka usetyenziswe ubuncinane amaxesha amabini ngonyaka.
Ummeli wabaniki-mvume bokumisela ukumiselwa komthetho osayilwayo ngokugqithisa intloko yakhe. Emva kokuba lo myalelo wegunya lobukhosi unikezelwa ngokusemthethweni, umrhumo-mthetho unamandla omthetho, ngaphandle kokuba uqulethe omnye umhla oya kusebenza ngawo.
Ibhasoti ngokwayo ithunyelwa kwiNdlu kaRhulumente ukuba isayinwe. Xa usayinwe, ibhilikhwe yasekuqaleni ibuyiselwa kwi-Senate, apho ifakwa kwi-archives.
UNdunankulu waseCanada uKim Campbell
Indima yamaLungu ePalamente aseCanada
UFredericton, iNkunzi yaseNew Brunswick
Iflegi yeSizwe yeKhanada
Yintoni Ulwaphulo-mthetho Lwenkohlakalo?
Ukuchaza i-"Stimp" ye-Putting Green okanye "I-Stimp Rating"
5 Iqhawe lomlobi-Abasetyhini base-Asiya
I-Top 10 Simahla yeVangeli Umculo IiWebhusayithi zeRadio
Iilwimi ezili-10 ezidumileyo
IsiNgesi ngeenjongo zonyango - Ukunceda umonde
IiRekhodi Zamazwe Ehlabathini Eli-Triple Ukusuka Ngo-1912 ukuya Kuza